Induction chitubu kupisa sisitimu ine yepakati frequency induction heater
Chishandiso che Induction kuoma chitubu chine chimiro chehelical kana mukoko. Iyo midziyo ine yekutenderera rutsigiro sisitimu uye induction yekupisa sisitimu. Iyo yekutsigira rutsigiro sisitimu yakagadzirirwa kutsigira iyo tsime apo iyo tsime inopisa neiyo induction yekupisa sisitimu. Iyo induction heat system ine induction coil system ine coil system. Iyo coil system ine nzvimbo yakatsemuka yakagadzirirwa kugamuchira tsime uye kupisa iro chitubu apo tsime rinotsigirwa pane yekutenderera rutsigiro system.
Coil zvitubu kana mashizha emashizha anoitwa neyakaipisa dhiraidhi yematare esimbi. Nekuda kwehunhu hwesimbi yesimbi, pane zvimwe zvinodiwa pakupisa tembiricha uye nguva panguva yekudziya. Kunze kwekutanga kupisa usati wapinda mumatsutso ematsutso kana kumanikidza kudhindisa muzvitubu zvemashizha, kune zvimwewo zvikumbiro zvehutano hwakasiyana hwekupisa, senge tsvimbo tsvimbo waya annealing, uye simbi pani induction pamusoro kuomesa. Kuve nehunhu hwekukasira kudziya, nekukurumidza kudzima, rakaringana simba kuburitsa kudzora, uye kunosiyana frequency frequency, HLQ's induction heat power supply yakanyatsokodzera kupisa kwemafuta kupisa kwesimbi simbi, kunyanya mune auto zvikamu indasitiri inosanganisira mashizha emashizha kana kutakura-kutakura tsime yekugadzira zvirimwa. Yakagadzirwa nevanyanzvi paHLL, yedu induction kudziyisa zvishandiso ese akashongedzerwa zvakanaka nezvakanaka zvekuchengetedza-simba, nekukurumidza kutanga / kumira, maawa makumi maviri nemaviri-basa kutenderera nguva, yakakwira simba-poindi, yakakwira otomatiki, kugona kwakanyanya, nyore kugadzirisa, uye hupenyu hwakareba hwekushandisa. Yedu induction hetera ave achizivikanwa zvakanyanya nevatengi muchirimo simbi yekugadzira indasitiri.
Iyo simbi induction yekuomesa maitiro ndeye yakajairwa maitiro anoshandiswa mukugadzirwa kwegore. Imwe nzira yakajairika yekuomesa inosanganisira yechinyakare yemuchadenga choto. Maitiro ekuomesa akadaro anononoka. Zvitubu zvinogona kuumbwa kubva kune dzakasiyana simbi (semuenzaniso, simbi isina chinhu, kabhoni simbi, alloy simbi, nezvimwewo). Kana simbi yechitubu yakanyatsoomeswa uye kutsamwiswa, chaiwo metallurgical parameter senge kuomarara uye micro-chimiro chinogona kuwanikwa.
Kana tsime rakaomeswa nechoto chedenga remuchadenga, chitubu chinotanga kuiswa muchoto chakaiswa pane imwe tembiricha yenguva yakati yenguva. Shure kwaizvozvo, chitubu chinobviswa chodzimwa mumafuta kana imwe mvura inodzima. Mushure meiyi yekutanga kuomesa maitiro, iyo yekuoma kwekuoma inowanzo kuve yakakwira kupfuura yaunoda. Nekudaro, iyo chitubu inowanzoiswa pasi peyakagadziriswa tempire kusvikira iyo chitubu yawana izvo zvinodiwa zvemuviri. Kana chitubu chikagadziriswa mushe, imwe yekristaro chimiro chesimbi chinoshandurwa kuita nyoro martensite ine yakawanda carbides yakanyungudutswa kuitira kuti ipe inodikanwa yepakati mamiriro echirimo uye inodiwa pamusoro pekuomarara kwechirimo.
Imwe nzira inoshandiswa kuomesa zvitubu ndeye induction heat. Iyo induction yekudziya maitiro inoitika nekukonzera iwo magetsi emagetsi munda mune inoitisa zvinhu zveiyo chitubu. Eddy currents inogadzirwa mukati meiyo conductive zvinhu izvo kuramba kwayo kunotungamira kune Joule kudziyisa. Induction kudziyisa kunogona kushandiswa kupisa simbi kune yayo yekunyungudika poindi kana zvichidikanwa izvo zvinopfuura zvakakwana kuti zviwedzere chigadzirwa.
Iyo yekumisikidza yekudziya maitiro inogona kupa inokurumidza kupisa kutenderera nguva kupfuura kupisa neyakajairwa mamiriro emuchadenga, uye iyo induction yekudziya maitiro inogona kurerutsa iko kubata kwekubata kwematsime, uye inogona inogona kugonesa otomatiki ekugadzirisa zvinhu zvechitubu mune yekuomesa maitiro. Kunyangwe kupisa induction kune zvakwakanakira pamusoro petsika yemuchadenga mavira, induction kudziya kwematsime kune matambudziko neyakaenzana kudziyisa iyo chitubu mukati megore kureba, kupisa magumo echirimo, uye kuchengetedza kwe induction heat coil kunyatsoshanda.
Categories Technologies Tags tenga induction chitubu hita, kuomesa kupisa kwematsutso, induction kudziyisa zvishandiso, induction heat heat, induction chitubu kuomesa, induction chitubu hita, induction kupisa kupisa, simbi chitubu induction hita, chitubu kuomesa, kupisa kwechirimo, pamusoro kuomesa chitubu Post navigation